FADLAN OGOW: waxaa muhiim ah inaad buuxiso dhammaan qeybaha codsiga. Musharixiinta waxaa lagu qaadayaa imtixaanka maskaxda. Haddii dalabkaagu uusan dhameystirnayn ama uusan si cad u muujin khibradda loo baahan yahay iyo / ama tababarka, dalabkaaga lama aqbalayo. Haddii aadan haynin macluumaad aad ku gasho qayb ama santuuq, fadlan qor N / A.
Magaca Hore & Magaca Dambe
Tusaale. 15 / 11 / 93
Cinwaanka hadda *
Cinwaankaaga halkan *
Mudo intee leeg ayaad ku nooshahay *
Lambarka amniga bulshada
Taleefanka gacanta *
Mawaxaad rabtaa inaad dalbato? *
Fadlan sax sanduuqa u dhigma doorashadaada. Codsi *
- DooroWaqti buuxaWaqti dhimanXilliga Xilliga / Ku-meelgaarka ah
Waqti hal mar ayaa la heli karaa oo keliya waqtiyada qaarkood ee maalinta. Fadlan sheeg saacadaha aad diyaar u tahay inaad shaqeyso haddii aad dooratay booska waqti-dhiman. *
Monday Mardi Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Mushaharka la rabo
Taariikhda bilawga helitaanka *
Fadlan sheeg goobta ama cinwaanka buuxa ee dugsi ama jaamacad kasta oo aad dhigatay (Dugsi hoose, dugsi sare, jaamacad & dugsi xirfadeed). *
Sannado ayaa ka qaybgalay
Dibloomada ayaa helay
Dhagsii calaamadda lagu daray ee boos dheeri ah
Diiwaanka Dembiyada iyo anshaxa
Weligaa ma lagu xukumay? *
Hadday haa tahay, sharax tirada dembiyada, nooca dambiga u horseeday xukumida, taariikhda dembigii ugu dambeeyay (s) la galay (la sameeyay), xukun (ga) lagu xukumay (yaasha) la xukumay ( Noocyada (yaasha) dhaqancelinta ee la helay. *
Ma qaadataa khamri iyo daroogo kale? *
Haddii laguu doorto shaqo, miyaad dooneysaa inaad soo gudbiso jeegareynta asalka? *
Haddii Maya, sharax: *
Khibrad xirfadeed, fadlan u sheeg khibradaada xirfadeed ee saddexdii sano ee ugu dambeeyey ee shaqadaadii ugu dambaysay: *
Cinwaanka iyo lambarka telefoonka
Sababaha (yada) ee aad ka tagtay (bidix). Noqo mid gaar ah
Qor liisyada aad qabatay, hawlaha la qabtay, xirfadaha loo isticmaalo ama la helo, dhiirrigelinta ama dhiirrigelinta markaad ka shaqaynaysay ganacsigan: *
Hadaad madax banaan tahay, sheeg magaca shirkadda:
Ma la xiriiri karnaa shaqaalihii hore ama kan hadda jira? *
Fadlan ku qor liiska ugu yaraan 3 tixraaca xirfadleyda, magaca iyo lambarka taleefanka, kuwaas oo u sheegi kara anshaxa shaqadaada iyo dabeecaddaada astaamaha: *
Lambarka telefoonka / Emailka
Soo qaado CV *
Dooro File (s)
Wanaagsan inaad ogaato
Maxaad u rabtaa in lagu shaqaaleeyo KongoLisolo? *
Maxaad u keentaa shirkadeena haddii lagu shaqaaleeyo? *
Maxay yihiin awoodaha gaarka ah ee kaa reebaya musharraxiinta kale? *
U adeegso booska hoose si aad u soo koobto wixii macluumaad dheeri ah ee lagama maarmaanka u ah inaad ku sharaxdo shahaadooyinkaaga oo buuxa ee booska gaarka ah ee aad dalbatid: *
Waxaan caddaynayaa, sharaftayda iyo sida ugu fiican ee aan u ogaado, in jawaabaha iyo qoraallada ku jira codsigaan ay yihiin run iyo dhammaystiran. Waxaan fahamsanahay in haddii codsigan uu ku jiro macluumaad been ah ama marin habaabis ah, codsigayga waa la diidi karaa ama joojinta qandaraaskeyga shirkaddan.
Shirkaddaan waxay fursado shaqo isku mid ah u siisaa dhammaan loo shaqeeyayaasha. Waxaan u hoggaansameynaa siyaasadda shaqo abuurka iyada oo aan loo eegin jinsiga, midabka, diinta, jinsiga, jihada galmada, asalka qaran, dhalashada, da'da ama dhalashada. Waxaan kuu xaqiijineynaa in fursadahaaga shaqo ee shirkadani ay ku tiirsan yihiin keliya shahaadadaada.
Waad ku mahadsantahay inaad buuxiso foomkan iyo danahaaga shirkadeena KongoLisolo
Phone. + 1 (888) 438-8022 | Fax. + 1 (888) 482-3335| shaqo@kongolisolo.co
Mali: "Janaayo 20, 1961, taariikh taariikhi ah" Madaxweynaha Modibo Keïta ayaa dib ugu yeeray (go'aan siyaasadeed) Kornel Pinana Drabo, oo hoos imanaya taliska General Soumaré, oo ah saldhigyada ciidamada cusub ee Mali, iyo saraakiil kale, oo uu ku jiro walaalkiis Kélétigui Drabo, inuu u qaabeeyo ciidamada Mali kahor intaanu madaxwaynuhu dalban ka bixitaanka ciidamada gumeysiga, labaatan maalmood kadib.
Marka hooyadaa diido inay ku siiso naas nuujin
Guusha dhabta ah ee nolosha: guusha waxay la xiriirtaa dulqaad, laakiin sidoo kale waxay kuxiran tahay wax badan oo wanaag ah "Qof walba wuxuu ka hadlayaa isbedelka, qof walbaa wuxuu doonayaa isbedel, laakiin in yar ayaa raba inay isbaddalaan"
Feb21 04: 42